Ngubani oneKhemistry ngokwesondo kunye naye ngokwe-Numerology - Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi
Ngubani ukuhambelana kwakho ngokwesondo okona kunamandla ngokusekwe kwi-Numerology
Inombolo yakho ye-numerology ityhila ulwazi oluxabisekileyo malunga nokuhambelana kwakho ngokwesondo kunye nesimbo sakho sesini. Bala eyakho kwaye ufumanise iminqweno yakho yesini.
Ubusazi na ukuba ungabala inombolo yakho ye-numerology ngoonobumba begama lakho? Le yeyona ndlela ilungileyo yokufunda ngakumbi ngobomi bothando. Inombolo yakho ibonelela ngolwazi malunga nokuba uhambelana nabani ngokwesondo, ngubani onayo i-chemistry kunye nento oyithandayo kunye nomnqweno phakathi kwamaphepha. Uhlalutyo lwegama lakho lunokumisela izinto ozikhethayo kwigumbi lokulala, ngoko lungiselela ukubala umzobo wakho okhethekileyo apha kwaye uphonononge ubunzulu besini sakho.
Bala inombolo yakho yobuqu
Khangela ukuhambelana kwakho
Ngubani odibana naye ngesondo?
Sonke sinobuntu bethu ngokwesondo, obuchukunyiswa yiminqweno kunye neengcinga ezithile. Inkqubo yethu yokubala iya tyhila eyona minqweno yakho inzulu kunye nokuba loluphi uhlobo lweqabane olukufanela kakhulu. Ingakunika neengcinga ezincinci eziya kukunceda ukuba ubunonge ubomi bakho bokwabelana ngesondo... Ungazazi ngcono wena kunye nesini seqabane lakho ngokubala ngamanani ngesondo, ebonisa ukuziphatha kwakho ebhedini ukusuka kwigama elipheleleyo.
-Fumana ukuba iinkwenkwezi zigcine ntoni ngeyakho I-horoscope yowama-2021 -
Igama le-Numerology kunye nesondo: Ubalwa njani inombolo yakho
Ilula kakhulu, yonke ileta yakho Ekuqaleni igama ihambelana nomzobo. Konke okufuneka ukwenze kukudibanisa ukuze ufumane eyakho inombolo yesini nge-numerology.
Masithathe umzekelo we: UJanine
J =1 A =1 N =5 I =9 N =5 KUNYE =5 - 1+1+5+9+5+5 = 26
Nciphisa inani libe ngumfanekiso omnye kufuneka udibanise ezi zimbini kunye umzekelo 2 + 6 = 8. inombolo yesini nge-numerology ngu8.
Ngawaphi amanani anekhemikhali yezesondo elungileyo?
Ngaba unomdla wokuba ngubani oza kukunika eyona orgasm ibalaseleyo ebomini bakho? Ewe, iindaba ezimnandi kukuba, ngoku ungafumana ngokutsho ukuhambelana kwamanani .
Inani: Iyahambelana ngokwesondo ne:
3 kunye no-5
6 kunye ne9
5 kunye no-1
3 kunye no-6
Ikhaltyhuleyitha yokuhambelana ne-Numerology: Ngaba uhambelana kakuhle?
Sebenzisa yethu simulator yokujonga kubudlelwane bakho kunye nobomi bothando.
Uluhlobo luni lomthandi kwaye unqwenela ntoni kwigumbi lokulala? Cofa kwindlela yakho yobomi ukuze ufumane
Inombolo 1 ngumdlalo we-3 kunye ne-5 - Ufuna ubomi bokwabelana ngesondo obunomdla
Ukwabelana ngesondo kukuthanda ngokwenene kunye nawe thanda ukuziva unomtsalane kunye nenkanuko , nangona inzondelelo yakho ngamanye amaxesha inokukufumana ngcono kwigumbi lokulala. Khumbula, ukwabelana ngesondo kukonwabisa amaqabane omabini kwaye ngamanye amaxesha kufuna ukupha nokuthatha; Ngapha koko, iqabane lakho lineemfuno nalo.
>>> 3 yaye 5 ukuqonda iimfuno zakho kunye neminqweno kwigumbi lokulala kwaye uya kuphuma uyonwabele nawe kwaye uzive ulungile ngawe. Ukudlala indima ethile kunye nemidlalo yekinky iya kubakho kunye nesi sibini.
Inombolo ye-2 iyahambelana ne-6 kunye ne-9 - Uphupha ngobomi besondo obunemvakalelo
Uyathandana kwaye unothando kwaye into enkulu kukuba ezi mpawu zinefuthe elimnandi kubomi bakho bobulili. Yeyakho, Ukwabelana ngesondo yindlela yokubonakalisa uthando onalo kwiqabane lakho kunye nokwandisa ukusondelana kwakho. Ubuntu bakho bomelele kangangokuba uyathanda ukuchitha ixesha ukonwabisa iqabane lakho kwaye ulonakalise ngee-caress ezithambileyo kunye ne-massage eshushu.
>>> I-6 inento efunekayo ukuqonda iimfuno zakho zesini kwaye i-9 iya kuhlala ikhona ukuphulaphula iminqweno yakho kwaye iyenze kunye nawe.
Inombolo 3 ihamba kakuhle kunye ne-5 kunye ne-1 - Ufuna ulonwabo kwigumbi lokulala
Akukho nto imbi kuwe kunokuba uwele kwindlela yokwabelana ngesondo ekruqulayo; spontaneity yinto oyifunayo ukuze uhlale kwiinzwane zakho. 3, uyathanda ukuzama izinto ezintsha kunye nokuvavanya into oyithandayo nongayithandiyo; ukwenza umfuniselo kumnandi kuwe! Isidingo sakho sokuzama izinto ezintsha sinokukutyhalela kwimida eyingozi. Uzithembe kakhulu ngokwesondo 3 kwaye awuqhelekanga kwi-sexting.
>>> 5 kumnandi nje kwigumbi lokulala njengoko ni 3 nto leyo ethetha ukuba xa nidibene nizakuba sisibini esigqibeleleyo. U-1 ukwangumdlalo olungileyo kuwe kwaye uyathanda ukunonga izinto.
Inombolo yesi-4 inekhemistri kunye no-3 kunye no-5 - Ulele kwigumbi lokulala
I-4 yenye yeenombolo ze-shyer kwaye ayibonakalisi kakhulu xa ifika kwisondo kwaye izama ukunganiki nantoni na. 4 ibeka kakhulu ukubaluleka kumaxabiso emveli kwaye nangaphambi kokuba bangene kubudlelwane bezesondo naye nabani na kufuneka bazive bekhululekile kwaye bekhululekile ngokupheleleyo. Xa u-4 eziva ezithembile kubudlelwane baya kuvula kancinci kwaye baqale ukuba nomdla kakhulu ngokwesondo.
>>> Nge-3, uya ukwabelana ngamava omlingo ngaphakathi nangaphandle kwegumbi lokulala. I-5 inomdla kwaye inesibindi kwaye iya kuvusa inkanuko yakho.
Inani lesi-5 lidibana kakuhle no-3 - Udlala inkanuko
Ukwabelana ngesondo ngumthombo wolonwabo kuwe inombolo yesi-5 kunye nendlela yokuba ukhulule kwaye ulibale ngeengxaki zakho. Yeyakho Ukwabelana ngesondo kufuneka kudlale kwaye kuphile, emva kokuba uthando lufanele ukuba yinto onokuyihleka ngayo, akunjalo? Uyathanda ukuzama izinto ezintsha kunye nokutshintsha izikhundla kunye nabalinganiswa bokudlala ukuze uqhole izinto kancinci kwigumbi lokulala. I-5, kufuneka ukhumbule ukuba iqabane lakho linezidingo, isondo asinakukunceda nje.
>>> Nge-3 awusoze udikwe enkosi ngokuvuma kwabo ukuzama izinto ezintsha nezigqithileyo!
Inani le-6 lihambelana no-2 - Iiseshoni ezivuthayo nezingalindelekanga
Ukuba ufuna ukuvusa isilwanyana sesondo ngaphakathi kwakho thatha ixesha lokuphulaphula intliziyo yakho kwaye uya kufumanisa ukuba yintoni oyifunayo ngokwenene ngokwesondo. Ngokuqhelekileyo ufuna ixesha kunye nothando ngaphambili ukulandela iminqweno yakho yesondo enzulu kubudlelwane obutsha. Ubona isondo njengento efuna ukuzuzwa kubudlelwane, kodwa xa sele uhamba akukho mntu unokukunqanda.
>>> 2 uyakukuzisela ubumnandi kunye nothando oludingayo ukuze uvule kwaye uzive ukhululekile.
Inombolo yesi-7 ihambelana kakuhle ne-3 kunye ne-6 - Isimbo sokwabelana ngesondo kwengqondo
Kwi-numerology inombolo yesi-7 isini kufuneka ibe yengqondo kwaye iimvakalelo zabo ngokwenene zinempembelelo kumntu abanomdla ngokwesondo kunye nendlela abaziva ngayo. Ukuhenda u-7, kufuneka nxibelelana nabo kwinqanaba lobukrelekrele kwaye ivuyise intelekelelo yabo. Amandla akho okuhlalutya akunika izakhono ozidingayo ukuze uziqonde kwaye uqonde ngokwenyani iimfuno zesondo kunye neminqweno yeqabane lakho. Ubukrelekrele bakho ngundoqo wokuba wonwabele iqabane lakho.
>>> Ngokuqinisekileyo uya kusebenzisana kakuhle no-3 no-6! Aba-6 baya kukuhenda ngentetho yabo emnandi kwaye 3 baya kukubeka ezandleni zabo ngenxa yobubele babo.
Inombolo 8 ine-chemistry kunye ne-1 - I-Sweet phakathi kwamaphepha
8, udinga ubomi besondo obunomdla nobunomdla ukuze uhlale unomdla kubudlelwane kunye nokwenza unxibelelwano neqabane lakho. Nangona, ngamanye amaxesha xa izinto zikhula ngokukhawuleza udla ngokuphindaphindiweyo lahlekelwa kukulawula iimvakalelo zakho kwaye ulahlekelwe kukuzenzela kwakho okuqaqambileyo. Ngokubanzi isitayile sakho sesondo simnandi kwaye sithambile.
>>> Kunye i-numerology 8 kunye ne-1 iya kukhokelela ubomi obuhambelanayo obugqibeleleyo kunye kwaye esi sibini asiyi kuba mfutshane kumnqweno!
Inombolo 9 ibetha ngesi-7-Usisithandwa esinomdla
Ubuni bakho bubukhali kwaye bunamandla! Isondo esilungileyo bubungqina bonxibelelwano oluqinileyo kunye nobudlelwane bakho, kunye nendlela yokuba uveze iimvakalelo zakho kwiqabane lakho. Unokuqonda okukhulu komzimba kwaye uyakwazi ukuyifumana iindawo ze-erogenous ngokulula kakhulu kulonwabo lweqabane lakho. Ukwabelana ngesondo kufana nobugcisa bakho ngamanye amaxesha ugxininise ekwenzeni ugqibelele kunokuba uyolo lweqabane lakho.
>>> I-7 inomonde xa kuziwa kuthando kunye nesondo kwaye isoloko ilungele ukuphulaphula iingcamango zesondo ezinzulu zeqabane.
- Ukuba ulonwabele eli nqaku, d ungaphoswa kwethu I-Numerology ka-2021 Uqikelelo lwendlela nganye yobomi. Jonga zeziphi iimpawu ze-zodiac ezihambelana kakhulu ngokwesondo .